Obamaan Gurraacha waan ta’an Qofaaf hin filamne
Dilbata, Guraandhalaa 07, 2016 Local time: 04:10
WASHINGTON, DC— Sagalee kaadhimamtonni paartilee lameen argatan baayyee walitti dhiyeenya kan qabaatu ta’a jechuun sabaa himaaleen adda addaa tilmaama turan.
Injifachuu prezidaant Obaamaa keessatti Sagalee Dubartootaa kan dargaggotaa fi sab-xiqqaaleen kennan hegereen Amerikaa boqonnaa haaraa keessa galuu isaaf ragaa tokko jedhu Dr.Isqeel Gabbisaa yunivarsitii keetriing irraa.
Kanaaf jecha warri Riipaablikaanii olaantummaan gam tokko qofaan eessa iyyu ga’u akka hin dandeenye kan hubatan fakkaata jedhu.
Gutummaa Gaaffii fi deebii kanaa armaa gaditti caqasaa.
Gutummaa Gaaffii fi deebii kanaa armaa gaditti caqasaa.i